You Maara na "Na-ejide Marketing" Dị? | Martech Zone
Aga m ekwu eziokwu. Mgbe Steve Hashman, Director, Ahịa & Ngwaahịa na Nkọwapụta Nkọwapụta na Ndị CUBE, dere m ihe ama ihe ederede banyere Na Jide Ahịa, Echere m na m chịrị dara n'olu dara ụda ma gbuo onwe m ume, Ị na-egwusa m egwu?.
Mana, dịka ezigbo ahịa ọ bụla, Steve mere ihe omume ụlọ akwụkwọ ya wee debe ozi infographic nke na-eme ka ohere ahụ doo anya.
70% nke ndị na-akpọ oku azụmaahịa bụ jidesie ike.
60% nke ndị ahụ ga-ekowe mgbe enweghị ozi ma ọ bụ egwu na-ejide.
30% nke ndị na-akpọ oku akpọghachila azụ!
Na egwu na ozi dị na njide, ndị folks ahụ ga-anọ Nkeji 3 karịa na-eche ka mmadụ zaa!
Mgbe ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-etinye oge dị ukwuu n'ịzụ ahịa, ha na-eleghara ọrụ na-eme mgbe atụmanya jikọtara anya! N'ezie, ụlọ ọrụ na-eji 94% nke mmefu ego ahịa ha eme ihe iji kpalite ndị ahịa ịkpọ… mana naanị 6% nọ na ya mgbe a natara oku ahụ.
Kedu ihe ndị ahịa gị na-anụ mgbe ha ejidere? Ihe omuma ihe omuma a abughi nani inye onu ogugu, o na-enyekwa ihe ngwọta iji mejuputa nke oma Na-Jide Marketing atụmatụ:
Tags: cubeozi na ejidereegwu na ejiderena-ejide ahịanọ na njigideịgbachi nkịtịsteve hashmantelefononye cube